कुनै जोखिममा फसेका आफ्नो बच्चालाई जीवन दिन आमाले के के गर्न सक्छिन् ? वा के समेत गर्छिन् ? यो भन्न निकै कठिन हुन्छ ।
यहाँ एक यस्तो भिडियो सार्वजनिक भएको छ, जसले जोकोहीलाई भावुक नबनाउला भन्न सकिन्न ।
यो भिडियो केही समय पूरानो भिडियो हो । तर सामाजिक सञ्जालमा अहिलेसम्म पनि निकै भाइरल भइरहेको छ ।
भियतनाममा भएको घटना भिडियोमा देखाइएको छ ।
क्रिकेटर जोफ्रा आर्चरले ट्वीटमा यो भिडियो शेयर गरेका छन् ।
भिडियोमा एक बाइकमा युवक, बच्चा तथा बच्चाको आमा यात्रा गर्दै हुन्छन् । त्यत्तिकैमा अर्को बाइकसँग त्यो बाइक टक्कर मार्छ ।
त्यसपछि बच्चा र आमा दुवै सडकमा पल्टिन्छन् । उताबाट ट्रक आइहाल्छ । ट्रकले बच्चालाई किच्न सक्नेसम्मको अवस्था आउँछ । तर उसकी आमाले आफूपनि पल्टैँदै दुर्घटना हुनबाट जोगाउँछिन् ।
धेरैले उनको यो साहसको प्रशंसा गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा अहिलेसम्म पनि यो भिडियो भाइरल भइरहेको छ ।
स्थानीय चुनावमा सर्लाहीका १७ उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी
अप्टिकल इल्युजन: धेरै कछुवाको बीचमा सर्प देख्नुभयो ?
अप्टिकल इल्युजनका तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालमा धेरै देखिन्छन् । अप्टिकल इल्युजन फोटो भनेको आँखालाई भ्रमित पार्ने खालको तस्वीर हो । यहाँ अब यो तस्वीरलाई हेर्नुहोस् र भन्नुहोस् कि यसमा सर्प कहाँ छ ? य...